Xildhibaanno iyo sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha oo maanta kulan la yeeshay Ra’iisul wasaaraha magacaaban – Kalfadhi
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ayaa sheegay in isaga iyo xildhibaanno ka tirsan BFS ay maanta la kulmeen Ra’iisul wasaaraha magacaaban mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha iyo xildhibaannada wehliyay ayaa ra’iisulwasaaraha magacaaban u hambalyeeyay una muujiyay taageero iyo garab istaag. Waxaana ay u ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan.
Mudane Mahdi ayaa dhowaan magacaabay guddi ay ku jiraan xildhibaanno iyo siihayayaasha wasaarrada qaar, kuwaas oo ka shaqeynayay munaasabada xil wareejinta, intaasi kaddibna waxaa la filayaa in Ra’iisul wasaaraha uu soo magacaabo golihiisa wasiirrada.
Balse intaasi oo dhan waxaa ka horreysay in Baarlamaanka ay codka kalsoonida ah ay siiyaan Ra’iisul wasaarada.